Vulvovaginitis အမျိုးသမီးအင်္ဂါရောင်ခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဆရာရှင့် ကျွန်မက ၂၆ နှစ်အရွယ်၊ ကလေး ၁ ယောက်အမေပါ။ သမီးလေးက ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ မွေးပြီးကတည်းကဝလို့ အခု ပေါင် ၁၅ဝ ရှိပါတယ်။ မရိုမသေစကား မိန်းမကိုယ်ကအနံ့နံလွန်းလို့ပါ။ ဆပ်ပြာမျိုးစုံလည်းသုံးဖူးပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးမှ နံတာပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘာဆေးသုံးရမလဲဆိုတာ ပြောပေးပါအုံးဆရာ။
အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို ကျောလွှားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါရောင်တာကို တိတိကျကျပြောရရင် Vulvovaginitis ဗဂျိုင်းနားနဲ့ မိန်းမကိုယ်ရောင်တာဖြစ်တယ်။
ရက်တို မိန်းမကိုယ် နဲ့ ဗဂျိုင်းနား ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတာတွေကတော့ -
1. Bacterial vaginosis ဗဂျိုင်းနားရောင်ခြင်းဆိုတာ ဗဂျိုင်းနားမှာ ရှိနေကြပိုးတွေ အခြေအနေပြောင်းသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့ Gardnerella vaginalis ဂါ့ဒ်နီရဲလား ဗဂျိုင်နိုက်တစ်၊
2. Candida albicans ကင်ဒီဒါ အယ်လ်ဘီကန်ပိုးကနေဖြစ်စေတဲ့ Candidiasis ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ်နဲ့
3. Trichomonas vaginalis ထွိုင်ကိုမိုးနပ်စ် ဗဂျိုင်နယ်လစ်ကနေဖြစ်စေတဲ့ Trichomoniasis ထွိုင်ကို မိုနီယေးဆစ် တွေ ဖြစ်တယ်။
Infectious vulvovaginitis ရောဂါပိုးကြောင့် ဗဂျိုင်းနားရောင်တာမျိုးက လိင်မှုရေးရာ တက်ကြွမှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်ပြီး Candidiasis ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ်၊ မတည့်တာနဲ့ ထိတွေ့လို ဖြစ်တဲ့ Contact vaginitis ကွန်တက် ဗဂျိုင်နိုက်တစ်နဲ့ အသက်ကြီးမှဖြစ်တဲ့ Atrophic vaginitis အထောဖစ် ဗဂျိုင်နိုက်တစ်တွေကတော့ လိင်နဲ့မဆိုင်ပဲဖြစ်တယ်။
သားဖွါးမီးယပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့၊ လိင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါရာဇဝင် အားလုံးမေးရမယ်။ သန့်ရှင်းလုပ်ရာမှာ ဆပ်ပြာ၊ ဆေးရည် စတာမှာ ဘာတွေသုံးသလဲ မေးရမယ်။ လိုတာထက်ပိုသုံးသူတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တတ်တယ်။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါရှိပြီး အသေအခြာကုသရဲ့လားမေးမယ်။ ဆက်ဆံရာမှာ အကာအကွယ် ပါ-မပါလဲ မေးရမယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း စစ်ဆေးတာ လုပ်ရမယ်။ ဆင်းတာ၊ အနံ့၊ အနာ၊ သားအိမ်ဝပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ သားအိမ်ဝက တခုခုဆင်းခြင်း၊ သားအိမ်ဝကို ထိ-ဖိရင် နာသလား။ ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ ဆီးစစ်တာလဲလုပ်ရမယ်။ ဆင်းနေတာကို ဓါတ်ခွဲခမ်းမှာ စစ်ဆေးမယ်၊ တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေ ရောင်တာကို သံသယရှိရင် ထွက်ထွက်ခြင်းခံထားတဲ့ ဆီးထဲမှာ ဂနိုရီးယားနဲ့ ကာလ်မိဒီးယားပိုးတွေကို စစ်ရမယ်။
သားအိမ်ဝနမူနာယူပြီး ပိုးတွေကို စစ်နိုင်တယ်။ ထွက်ထွက်ခြင်းခံထားတဲ့ ဆီးမဟုတ်ဘဲ ဆီးသွားနေစဉ် အလည်ပိုင်းမှာ ခံယူတဲ့ဆီးမှာ ပိုး ရှိ-မရှိ စစ်နိုင်တယ်။
Personal hygiene for women အမျိုးသမီးများ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကိုလည်းဖတ်ပြီးလိုက်နာပါ။